Iswiidhan oo waqti kordhin ku sameeysay ilaaladda laga hayo xudduudaha | Somaliska
Iswiidhan oo waqti kordhin ku sameeysay ilaaladda laga hayo xudduudaha
Dowladda Iswiidhan ayaa daboolka ka qaaday ineey waqtiga u dheereyneyso ilaaladda laga hayo xudduudaha dalka iyo baaritaanka dadka aqoonsigooda la baaro. Arrintan ayaa timid ka dib markii toddobaadka soo socda ay ku egtahay waqtigii loogu talagalay in ilaalo laga qabto xuduudaha baaritaana lugu sameeyo dadyowga xadka ka soo talaaba.
Ra’iisal wasaaraha dalka Stefan Löfven, oo kaashanayey gudiga baarlamaada Yurub ee gogol xaarka u sameeynaya kulanka madaxda Yurub ku yeelaneeyso maalinta jimcaha jasiiradda Malta, ayaa sheegay in waqti kordhin lugu sameeyey ilaalinta iyo baaritaanada laga hayo xudduudaha dalka. Buundada ama beriijka isku xira Denmaark iyo Iswiidhan ee Öresundbron, dekadaha gobolada koonfureed iyo galbeedka ayaa sanadkii 2015-ta lugu soo rogay in ilaalo xoogan laga qabto lana baaro cid kasta oo ka soo galeeysa. Xilligaas oo ahaa xilligii ay qaxooti badan ku soo jabeen dalkaan Iswiidhan. Baaritaankan ayaa dowladda waxaa ay u arkeeysay mid xal keenaya.
Maalinta jimcaha ee innagu soo fool leh ayaa madaxda dalalka Midowga Yurub waxaa shir uga furmayaa jasiiradda Malta oo iyadu sanadkan heeysa hogaanka Midowga. Kulankan ayaa la filayaa in looga munaaqishoon doono arrimaha ay ka mid yihiin ka bixitaanka ay dowladda Ingriiska kaga baxday Midowga Yurub, la dagaalanka argagaxisada, xiisada muhaajiriinta iyo madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donal Trump oo haatan isagu u muuqda mid caalamka ku soo kordhiyey xiisad iyo colaadin naceyb ku saleeysan muslimiinta, iyadoo toddobaadkii hore uu soo rogay sharci ku meel gaar ah oo toddobo wadan oo muslimiin ah ugu diiday ineey soo galaan dalkiisa. Dalalkaasi ayaa waxaa ka mid ah Soomaaliya.